နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်​နေ့တုန်းက Forbes magazine က​နေ ၂၀၂၂ ခုနှစ် Grammy ဆု​ပေးပွဲရဲ့ “Record of the Year” ဆုအတွက် ခန့်မှန်းချက်​တွေကို ​ရေးသားထားတဲ့ ​ဆောင်းပါးတစ်​​စောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ “Record of the Year” ဆုဟာ “Best New Artist”, “Song of the Year” နဲ့ “Album of the Year” ဆု​တွေလိုပဲ Grammy ရဲ့ အဓိကဆုကြီး​တွေထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
“Record of the Year” ဆုကို နှစ်တစ်နှစ်မှာ အ​​အောင်မြင်ဆုံး၊ လူသိအများဆုံး၊ အ​​​​ကောင်းဆုံးဆိုတာကို ဘယ်လိုမှ ငြင်းမရတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ​ပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဲ့ဒီသီချင်းဟာ ​ရောင်းအားအမြင့်ဆုံးစံချိန်လည်း ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ စဉ်းစား​နေစရာမလို​လောက်​အောင် ဒီဆုအတွက် ပိုင်ရှင်က သိသာထင်ရှား​ပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာ​တော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကို လွှမ်းမိုးနိုင်​လောက်​အောင် ​အောင်မြင်​ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ သီချင်းများစွာ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
Forbes က​တော့ အဲ့လိုသီချင်း​တွေထဲက တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ BTS အဖွဲ့ရဲ့ “Butter” ဟာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် Grammy ဆု​ပေးပွဲမှာ “Record of the Year” ဆုအတွက် ဇကာတင်ဝင်လိမ့်မယ်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။ “Butter” ဟာ ယခုနှစ်အတွက် တောင်ကိုရီးယားတင်သာမက အ​မေရိကန်နိုင်ငံမှာပါ စံချိန်တင်​အောင်မြင်မှုကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ ၉ ရက်​က​နေ ၁၅ ရက်အတွင်း album အချပ်​ရေ​ပေါင်း ၁.၉ သန်းကို ​ရောင်းချခဲ့ရပြီး ၂၀၂၁ မှာ ထွက်ရှိတဲ့ album ​တွေထဲ အမြင့်ဆုံး first-week sales ကို ရရှိတဲ့ album အဖြစ် Hanteo Chart မှာ မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး​နေ့မှာတင် အချပ်​ရေ ၁,၇၁၁,၈၇၀ သန်းကို ​ရောင်းချခဲ့ရတာ​ကြောင့် album ထွက်ရှိတဲ့ ပထမဆုံး​နေ့မှာတင် အချပ်​ရေ ၁ သန်း​ကျော်​ရောင်းချရတဲ့ တစ်ခုတည်း​သော album လည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် “Butter” ဟာ ပထမအပတ်မှာ အချပ်​ရေ ၁.၅ သန်း​ကျော်​ရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ တစ်ခုတည်း​သော album လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတင်မက​သေးပဲ “Butter” ဟာ “Billboard Hot 100” chart မှာ အချိန်အကြာဆုံး Top 10 ဝင်တဲ့ ပထမဆုံး K-Pop သီချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Forbes ရဲ့ ယူဆချက်အရ BTS ရဲ့ “Butter” အပြင် Taylor Swift ရဲ့ “Willow,” Justin Bieber ရဲ့ “Peaches” (feat. Daniel Caesar & Giveon), Doja Cat ရဲ့ “Kiss Me More” (feat. SZA), Olivia Rodrigo ရဲ့ “Drivers License,” The Kid Laroi နဲ့ Justin Bieber ရဲ့ “Stay” နဲ့ Silk Sonic ရဲ့ “Leave the Door Open” စတဲ့ သီချင်း​တွေကလည်း “Record of the Year” ဆုအတွက် ဇကာတင်ဝင်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
BTS အဖွဲ့အ​နေနဲ့ ယခင်နှစ်က Grammy ဆု​ပေးပွဲမှာလည်း ဇကာတင်ဝင်ခဲ​့ပေမဲ့ ကံမ​ကောင်းစွာပဲ ဆု​နဲ့ လွဲ​ချော်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ ယခုနှစ်မှာ​တော့ Grammy ဆုကို ကျိန်း​သေ​ပေါက် ရရှိမယ်လို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဂီတပညာရှင်​တွေနဲ့ ပရိသတ်​တွေက ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် Grammy ဆု​ပေးပွဲအတွက် ဇကာတင်ဝင်တဲ့ အနုပညာရှင်​တွေကို Grammy ရဲ့ official website, YouTube, TikTok, Twitter နဲ့ Facebook page ​တွေက​နေ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်​နေ့နဲ့ ၂၄ ရက်​နေ့​တွေမှာ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ကာ ​ကြေငြာ​ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး BTS အဖွဲ့ဟာ ဇကာတင်စာရင်းကို ​ကြေငြာ​ပေးမယ့် presenter ​​တွေထဲက တစ်ဦးအဖြစ်လည်း ပါဝင်​ဆောင်ရွက်​ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Next အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးကိစ္စရဲ့ နောက်ဆုံးတိုးတက်မှု ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Zhang Yixing Studio »
Previous « တချို့မိန်းက​လေး​တွေထက်​တောင် မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်ရာမှာ ထူးချွန်တဲ့ ​ယောကျ်ား​လေး K-Pop Idol (၅) ဦး